Olunye uhlobo lwentengiso: imali | Ezezimali
Olunye uhlobo lwentengiso: imali
UJoseph kwakhona | | Ezopolitiko
Ngaphambi kwe- ukungazinzi ezinokuveliswa kwiimarike ze-equity kwesi siqingatha sokuqala sonyaka, ezinokuthi zenziwe njengemali engenye yotyalo-mali ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokuphathelene noku, kufuneka kukhunjulwe ukuba ingxelo yakutshanje ye-Ebury ibonisa ukuba “kuyamangalisa ukuba ukusebenza kwedola bekuxubene nezezimali eziphambili zeemarike ezisakhulayo, uninzi lwazo lwenze ngcono kakhulu kunembuyekezo yase-USA, njengoloyiko oluchaphazela uqoqosho lwehlabathi luyancipha ”.
Ukusebenza kwiimarike zemali kuyinkimbinkimbi kuba zikhawuleza. Zizinto zexabiso zemali ezo ziyahluka ixabiso labo rhoqo. Ngokukhawuleza okukhulu okwenza ukuba inzuzo enkulu ifunyanwe kwiiyure ezimbalwa. Nangona ngesizathu esifanayo, ithatha umngcipheko omkhulu ekuhambeni kwayo kwaye ifuna ukufunda okukhulu ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho elinye lamaqhosha okwenza utyalomali kukufumana utshintsho kwiimali. Umzekelo, phakathi kwedola kunye ne-euro.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kolu tyalo-mali sisiphumo sotshintshiselwano lwemali esifuna oko iikhomishini ezifuna ngakumbi kunezinye iimveliso zemali. Ngesi sizathu, kufuneka ukuba icace gca malunga nexesha lokungena kunye nokuphuma kwiimarike zemali. Ayothusi into yokuba indleko zale misebenzi zinokuphindeka kabini kunezo ezinye iiasethi zemali, njengokuthenga nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya. Ngokusebenzisa imarike ebonakaliswa bubhetyebhetye obukhulu kunye nokungazinzi. Umahluko obanzi phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi.
1 Imali: i-euro kwiziko
2 Iindaba ezilungileyo kwidola
3 Ilindelwe iBrexit iponti
Imali: i-euro kwiziko
Isibhengezo sokuba uChristiane Lagarde uza kuba ngumongameli omtsha we-ECB satolikwa njengeendaba zokuqhubeka kwaye, mhlawumbi, zokumodareyitha kumgaqo-nkqubo wezemali, ingxelo ye-Ebury ibonisa. Apho kuyacaca ukuba iimarike ngokuqinisekileyo zikubonile ngale ndlela, njengoko iibhondi zase-Italiya zaqina kwaye i-euro yaqala ukuphulukana nomhlaba nangaphambi kokuba ingxelo yemivuzo yase-US ikhutshwe ngoLwesihlanu
Ngokwembono ka-Ebury, ngaphezulu, isigqibo se-EU sokungasebenzisi isohlwayo ngokuchasene ne-Itali ngenxa yentsilelo kuhlahlo-lwabiwo mali ibonisa umbono onganyamezeliyo wokonyusa imali. Oku kuthetha ukuba, ngokwe-Ebury, ukongezwa kwemali okuncinci kunokuba kungafuneki, nto leyo elungileyo kwi-euro kwixesha eliphakathi. Kwimeko nayiphi na into, yonke into ibonakala ibonisa ukuba le mali iya kuba yenye yezona zinto zisebenza kule asethi ebalulekileyo yemali. Apho kunokwenzeka khona ukuba ucacise ukuba loluphi utshintsho oluza kwenziwa kulo: idola, i-franc yaseSwitzerland, i-yen yaseJapan, njl.
Iindaba ezilungileyo kwidola
Iindaba ezilungileyo kwiveki ephelileyo kwishishini lezorhwebo zigutyungelwe ngolwe-Sihlanu ngengxelo eyomeleleyo yomvuzo e-United States, ngokophando lwe-Ebury. Apho ukufunyanwa kwemisebenzi kufunyenwe kuchacha ngamandla ukusukela oko kwawa ekwindla kunyaka ophelileyo, imivuzo yokwenyani iyaqhubeka nokukhula ngokuthozamileyo kodwa ngokuthe chu. Akukho nto ibonisa ukuba kukho uqoqosho okanye ukwehla okukhulu. Emva kwengxelo, iimarike zibonakalise ukuba azikhuphi nelinye ithuba lokufumana amanye amanqaku angama-50 kule ntlanganiso yasentwasahlobo. Indawo yokuGcina. Ngelixa sicinga ukuba ukusikwa akunakuthintelwa kwezopolitiko, asiziboni iimeko zomjikelo osikiweyo ozinzileyo.
Elinye lamaqhosha ekuya kujoliswa kuwo le mali yamanye amazwe sisigqibo esinokwenziwa ligunya lezemali e-United States (FED). Ngengqondo yokuba ingaba iyakonyusa amaqondo wenzala kulo mmandla wezoqoqosho kwaye iyakuba sisigqibo sokuvela kweemarike zezabelo zamanye amazwe. Apho, kuxhomekeke kwisigqibo esenziweyo, ungaya ngapha nangapha. Akunakulityalwa ukuba idola yaseMelika yenye yeemali kwi apho kuvulwa khona izithuba ezininzi ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngevolumu yokurhweba ephezulu kakhulu kwaye ngaphezulu kwezinye iimali.
Ilindelwe iBrexit iponti
Iphawundi ephezulu yenye yezezimali ezisebenzayo kwimarike yamanye amazwe. Kule meko, ingxelo yakutshanje ye-Ebury ibonisa iimpawu ezikhulayo zokuba ukungaqiniseki kukaBrexit kuyaqala kuchaphazela ukuzithemba kweshishini lase-UK. Umsebenzi weshishini Izalathi ze-PMI ziwele ngaphantsi kwenqanaba lama-50, zibonisa ucinezelo. Kule veki siza kubona ukuba oku kuphulukana nokuzithemba kubonisiwe kwidatha yoqoqosho yokwenyani xa Ukukhula kweGDP kwiinyanga ezintathu zokugqibela zonyaka ophelileyo.
Okwangoku, kunokuthiwa ngaphandle kwempazamo ukuba yenye yeemali eziguquguqukayo. Umahluko obanzi kakhulu kumaxabiso abo aphezulu kunye neyona nto incinci evumela ukuba kwenziwe imisebenzi yorhwebo. Ngokukodwa, ngenxa yeentshukumo ezivela ekuphumeni kwe-Great Britain kwi-European Union. Ngenxa yoku, kuyinyani ukuba ukonga kunokwenziwa inzuzo ukuba bayayazi indlela yokuhlengahlengisa ukungena nokuphuma kwezikhundla zabo kwintengiso yotshintshiselwano lwangaphandle. Ngokukodwa notshintsho lwayo nge-euro kunye nedola yaseMelika.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba imeko ngokubanzi kwezi veki zidlulileyo ibuyile ngokucacileyo kwidola kwaye inokunika isikhombisi kwizigqibo zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona isebenza ixesha elifutshane kakhulu, elilixesha lokusisigxina apho le misebenzi ijolise khona. Ngayiphi na imeko, yenye yeendlela abatyali zimali abathengisayo abanazo ukuze babenokwenza ukonga kwabo kunenzuzo kwisiqendu sesibini sonyaka. Ngaphaya kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwezobuchwephesha ezinokuthi zibe nefuthe kwindaleko yezi zinto zibalulekileyo zemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Ezopolitiko » Olunye uhlobo lwentengiso: imali